कालसर्प योगको अनिष्टबाट बच्न गर्नुहोस् यी तरिका – hamrosandesh.com
कालसर्प योगको अनिष्टबाट बच्न गर्नुहोस् यी तरिका
हिजोआज कालसर्प योगको बारेमा धेरै चर्चा सुनिन्छ । कालसर्प योग भनेको के हो ? कालसर्प योगको निर्माण कसरी हुन्छ ? र यसको समाधान के हो त ?राहु र केतु यी दुई ग्रह सौर्यमण्डलमा सँधै १८० डिग्रीको अन्तरमा हुने गर्दछन् । कहिले पनि यि दूइको दुरी घटबढ हुँदैन । जब सौरमण्डलमा राहु र केतु को एक पट्टि मात्र सबै ग्रह हुन पुग्दछन् त्यो समयमा कालसर्प योग हुने गर्दछ ।
ज्योतिष शास्त्रको यस प्रमाणले पनि कालसर्प योग यस्तै अवस्थालाई भनिन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । कालसर्प योग भएमा वंशनाश नै हुन्छ भनिएको पाइन्छ तर व्यवहारमा भने यस्तो भेटिँदैन । कालसर्प योग भएको मानिसको जिवनमा भने संघर्ष धेरै नै हुने गर्दछ । धेरै संघर्ष हुने भएकाले नै लाक्षणिक रुपमा वंश नाश हुन्छ भनेको हुन सक्ने देखिन्छ कालसर्प योगलाई ज्योतिषका सबै आचार्यहरुले भने स्विकारेका छैनन् । थोरै ज्योतिषका आचार्यहरुले भने यसलाई आफ्ना ज्योतिषिय ग्रन्थहरुमा स्विकारेको भेटिन्छ । ज्योतिष शाास्त्रमा यस्ता हजारौँ योगहरु को वर्णन गरिएको पाइन्छ । राजयोग, महाराज योग, धनयोग, दरिद्र योग, मृत्यु योग, अल्पमृत्यु योग, रोग योग जस्ता योगहरु नाम अनुसार नै फल दिने गर्दछन् । कुण्डलीको १२ भावमा बसेका ग्रहहरुको आधारमा नै यस्तै विभिन्न योगहरु निर्माण हुने गर्दछन् ।